Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ anya anyị agbakwunye ụdị atụmatụ paịlị agbakwunyere ... na ebe ị ga - eme ha | Martech Zone
You maara na e nwere n'ezie sayensị sayensị ka agba abụọ ma ọ bụ karịa wee kwado ibe ha? Adịghị m ophthalmologist ma ọ bụ optometrist, mana m ga-anwa ịtụgharị sayensị ebe a maka ndị dị mfe dị ka onwe m. Ka anyị malite na agba n'ozuzu.
Agba bụ ugboro
Apụl na-acha ọbara ọbara… nri? Ọfọn, ọ bụghị n'ezie. Ugboro ole etu esi egosi ìhè na weghachite n’elu apụl na-eme ka ọ bụrụ ihe na-achọpụta, gbanwee site na anya anyị dị ka akara ngosi, zigara ụbụrụ anyị ebe anyị matara na ọ bụ “ọbara ọbara”. Ugh… nke na-ewute m n’isi na-eche maka ya. Ọ bụ eziokwu n'agbanyeghị… agba bụ naanị ugboro ole ọkụ. Nke a bụ echiche nke ụdịdị electromagnetic na agba ọ bụla:
Nke a bụ kpọmkwem ihe mere ọkụ ọcha na-acha ọkụ na -emepụta eke egwurugwu. Ihe na-eme n'ezie bụ na kristal ahụ na-agbanwe ugboro ole ọ na - agagharị karịa ka a gbanwere ọkụ ahụ:
Nkume kristal na-agbasasị ìhè ọcha n'ọtụtụ agba.
Anya gị bụ ndị na - achọpụta ugboro ugboro
Anya gị bụ n'ezie onye na - achọpụta ugboro ugboro maka ọtụtụ agba agba na ngalaba electromagnetic. Ikike gị ịchọpụta agba na-eme site na ụdị cones dị iche iche na mgbidi anya gị nke a na-ejikọzi na akwara anya gị. Somefọdụ n'ime cones a na-ahụ usoro ọ bụla dị iche iche, wee sụgharịa ya na mgbaàmà na akwara ngwa anya gị, zigara ụbụrụ gị, ebe amata ya.
Ọ dịtụla mgbe ị hụrụ na ị nwere ike ilegide anya ogologo oge na ihe dị oke elu, lelee anya, ma gaa n'ihu na-ahụ nseta nke na-adabaghị na agba mbụ ị na-ele? Ka anyị kwuo na ọ bụ square na-acha anụnụ anụnụ na mgbidi ọcha:
Mgbe obere oge gachara, mkpụrụ ndụ ndị dị n’anya gị nke na-acha anụnụ anụnụ ga-enwe ike ọgwụgwụ, na-eme ka mgbaàmà ha zigara ụbụrụ gị nke na-esichaghị ike. Ebe ọ bụ na akụkụ nke ọhụụ a na-ahụkarị dị ntakịrị, mgbe ị na-ele mgbidi ọcha mgbe ị lechara anya na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ, ị ga-ahụ nsị oroma na-acha ike. Ihe ị na-ahụ bụ ụdị dị ọcha dị na mgbidi, wepụrụ ntakịrị ntakịrị acha anụnụ anụnụ, nke ụbụrụ gị na-arụ dị ka oroma.
Usoro Agba 101: Ime Agba agba na-arụ ọrụ maka gị
Ọ bụrụ na ike ọgwụgwụ ahụ emeghị, anya anyị na ụbụrụ anyị agaghị arụ ọrụ siri ike ịkọwa ọtụtụ ntụgharị (dịka agba) ha na-ahụ.
Visual Noise na Harmon
Ka anyi jiri myirita na agba. Ọ bụrụ na ị gee ntị ugboro ugboro na mpịakọta ndị na-anaghị arụkọ ọrụ, ị ga-eche na ọ bụ mkpọtụ. Nke a adịghị ka agba, ebe nchapụta, iche, na agba achọpụtara nwere ike ịbụ anya na-eme mkpọtụ ma ọ bụ na-emekọ ọnụ. N'ime usoro nyocha ọ bụla, anyị chọrọ ịrụ ọrụ maka nkwekọ.
Ọ bụ ya mere na ị gaghị ahụ mmezi na ndabere nke ihe nkiri na-eyi uwe elu na-acha uhie uhie. Ọ bụ ya mere ndị na-achọ ime ụlọ ji arụsi ọrụ ike iji chọta agbakwunye agbakwunye na mgbidi, arịa ụlọ, nka, na akụkụ ndị ọzọ nke ime ụlọ ahụ. Agba dị oke egwu n'ịmepụta ọnọdụ nke onye ọbịa ahụ mgbe ha banyere n'ime ya dabere na ọ dị mfe ụbụrụ ha ịkọwa agba.
your palette agba bụ ihe nakọtara nke ịgbakọta band na nkwekọrịta mara mma. Dịkwa ka olu na ihe a chịkọtara jikọtara ọnụ na ụda olu na ụda olu ugboro ugboro… otu a ka agbakwụnye agbakwunye agbakwunye palette agba gị. Padị agba palette bụ ụdị ọrụ nka maka ndị ọkachamara ndị na-emezi nchọpụta agba ha nke ọma, mana ọ bụ sayensị sayensị na-arụ ọrụ n'ihi na enwere ike ịgụta ụda ekele.
More na harmonies anya… ka anyị laghachi na agba tiori.
Pixels dijitalụ dijitalụ jikọtara ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ. Uhie = 0, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ = 0, na-acha anụnụ anụnụ = 0 na-egosipụta dị ka acha ọcha na acha uhie uhie = 255, green = 255, na-acha anụnụ anụnụ = 255 a hụrụ dị ka nwa. Ihe ọ bụla dị n’etiti dị iche na agba agba agba atọ. Isi ihe dị iche iche nke ịgbakọ agba agbakwunye dị mfe… naanị wepụ ụkpụrụ RGB site na 255 maka Uru RGB ọhụrụ. Lee otu ihe atụ:
Ihe dị iche na nha ọkụ a na-acha odo odo na acha anụnụ anụnụ dị oke iche na ọ dị iche, mana ọ bụghị nke na ọ na-esiri anyị ike ịkọwa. Udiri agba nwere nkwado ma na-atọ ndị nabatara anyị ụtọ!
Kọmputa otu agba dị mfe uting Mgbakọ 3 ma ọ bụ karịa arụkọ na agba na-achọ ka ị gbakọọ Ẹkot quantities n'etiti onye ọ bụla nke nhọrọ. Ya kpatara agba palette atụmatụ ọkụ bata na aka! Ngwa-ngwa ole na ole dị mkpa, ngwaọrụ ndị a nwere ike ịnye gị ọtụtụ agba ga-agbakwunye ibe gị.
Ghọta mmekọrịta dị n’etiti agba kachasị mma iji anya agba agba. A na-ahazi agba ndị dị na okirikiri na-adabereghị ugboro ole ha nwere. Ogologo radial bụ saturation nke agba na ọnọdụ azimuthal na gburugburu dị ka agba nke agba.
Fun bụ eziokwu: Sir Isaac Newton buru ụzọ mepụta Agba Agba na 1665, ihe ndabere maka nnwale ya na prisms. Nnwale ya dugara na nchepụta na acha ọbara ọbara, odo na acha anụnụ anụnụ bụ agba bụ isi nke agba ndị ọzọ niile. Akụkụ akụkụ… ọ tinyekwara "ndetu" egwu na agba ọ bụla.
Kwado m na Harmony…
Ofdị Harmonies Agba
A maara mmekọrịta dị n'etiti na otu esi agbakọ agba agba ọ bụla kwekọrọ. Nke a bụ nnukwu nyocha vidiyo:
A na-ejikọta àgwà dị iche iche na ụdị nke ọ bụla:
Ọ dị - ìgwè nke agba ndị na-esote ibe ha na agba agba.
Monochromatic - otu dị iche iche sitere na otu isi hue ma gbasaa site na ojiji ya, ụda ya, na tints ya.
Atọ n'ime - iche iche na agba na-evenly spaced gburugburu agba wheel
Ntinye - ìgwè nke agba ndị na-abụghị ibe ha na agba agba.
Gbasaa arụkọ - mgbanwe nke arụkọ ebe ejiri ya rụọ agba abụọ n'akụkụ ya.
Rektangulu (Tetradic) - na - eji agba anọ edobere ụzọ abụọ
square - yiri nke rektangulu, ma na niile anọ na agba spaced evenly gburugburu agba gburugburu
Kọkọrọ - agba na agba abụọ dị n'akụkụ ya na agba ya
Onyinyo - ukpụhọde nke tint (abawanye na lightness), ma ọ bụ ndò (ọchịchịrị) maka isi na agba.
Ihe ndị a abụghị isiokwu nke onwe, ha bụ ezigbo ngụkọta oge mgbakọ na mwepụ aha mara mma nke na-enyere anyị aka ịghọta nghazi.
Agba Palette atụmatụ Generators
Iji igwe ihe eji eme ihe na agba agba, ị nwere ike ị nweta ọfụma, jikọtara agba dị ka nke a:
M na-ejikarị ndị na-emepụta ihe ndị eji agba agba mgbe m na-arụ ọrụ na saịtị ndị ahịa. N'ihi na abughi m ọkachamara na agba, ngwaọrụ ndị a na-enyere m aka ịhọrọ ihe ndị dị mma dịka nzụlite, ala, ala ụkwụ, agba isi na nke abụọ. Nsonaazụ bụ weebụsaịtị webụ ihe na-atọ ụtọ karịa anya! Ọ bụ aghụghọ, atụmatụ dị oke egwu iji tinye n'ọrụ nke ihe ọ bụla - site na mgbasa ozi gaa na weebụsaịtị niile.
Lee ụfọdụ ezigbo agba palette atụmatụ na-enye ọkụ n'ịntanetị:
Adobe - ngwa oru di egwu nke nwere agba 5 ebe ị nwere ike ịnwale ụdị dị iche iche, mee mgbanwe, yana chekwaa isiokwu gị na ngwaahịa Adobe ọ bụla.
Akuko - Nnukwu nchịkọta nke akara agba akara akara gbara gburugburu.
Canva - bulite foto ma ha ejiri ya mee ntọala maka palette gị!
Colllor - mepụta palette agba agba na-agbanwe agbanwe na ịpị aka ole na ole.
Agba mmebe - Naanị bulie agba ma ọ bụ jiri agba ahọrọ na ngwa ahụ mere ndị ọzọ.
Hchụ nta - usoro a na - akwụghị ụgwọ ma ghe oghe maka mkpali eji agba agba nwere ọtụtụ ụdị agba agba eji aka ahọrọ
Agba agba - mepụta agba agba maka Instagram iji mee ka ọ dị mma.
Agba - igwe na-acha agba agba nke na-eji mmuta miri emi. Ọ nwere ike ịmụta ụdị agba site na foto, ihe nkiri, na nka ndị ama ama.
Agba agba - naanị tinye otu na agba atọ ma wepụta ụfọdụ atụmatụ!
Agbaagba - ezigbo ahụmahụ ihuenyo zuru oke maka ịmepụta paịlị agba gị na ọtụtụ nkwekọ kwekọrọ na ekpe.
Ndị na-acha akwụkwọ ndụ - obodo okike ebe ndi mmadu sitere na gburugburu uwa na-eke ma kesaa agba, palettes, na ihe nakawa, kwurita ihe omuma ohuru, ma nyochaa ihe ndi mara mma.
Coolers - mepụta palette zuru oke ma ọ bụ nweta mmụọ nsọ site na ọtụtụ puku agba agba mara mma.
Ihe Mgbaji Agba Data - Jiri paleji ahọrọ iji mepụta usoro agba ndị dị anya equidistant.
Asụsụ - na-eji AI iji mụta agba ndị ị masịrị ma mepụta palettes ka ị chọpụta, chọọ ma chekwaa.
ihe Design - mepụta, kekọrịta, ma tinye atụmatụ agba maka UI gị. Ọ na-abịa na mbupụ gị ngwa!
Muzli agba - tinye aha agba ma ọ bụ koodu, ma mepụta palette mara mma.
Paletton - họrọ ụcha agba ma bụrụ mmụọ nsọ.
Veranda - na-enweta mmụọ nsọ site na tọn nke agba palettes dị ịtụnanya.
Agba na nnweta
Biko buru n'uche ka ị na-ekpebi ịhazi atụmatụ palette gị ọzọ na enwere ọnụọgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ nwere ntụpọ anya na ụkọ agba ndị chọrọ mmekọrịta na ahụmịhe gị.
Tule - Agba ọ bụla nwere onwe nwere ọkụ. Agba nke machie na ihe ndị dị ya nso ga-enwerịrị ogo nrịanrịa nke 4.5: 1 ka ndị nwere ntụpọ anya wee nwee ike ịmata ha. Agaghị m agabiga nsogbu nke ịnwa ịgbakọ oke ahụ n'onwe gị, ịnwere ike ịnwale oke gị nke agba abụọ Agba, Di iche Ratio, ma ọ bụ Agba.
Ihe ngosi - Igosiputa ubi na acha uhie uhie anaghị enyere onye nwere ụcha agba aka. Jide n'aka itinye ụfọdụ ụdị ozi ma ọ bụ akara ngosi iji mee ka ha mata na enwere nsogbu.
Focus - Ọtụtụ ndị mmadụ iji ịnyịnya igodo ma ọ bụ ihe nlegharị anya na-agagharị. Jide n'aka na ejiri njirimara gị rụọ ọrụ nke ọma iji kpado ha niile iji nweta saịtị gị. Maka ndị nwere ntụpọ anya, iji oghere ọcha na ike ịbawanye ma ọ bụ belata nha-ederede ebe ọ naghị ebibi nhazi ahụ dị oke mkpa.
I bu dibia anya? Onye ọkachamara agba? Ọkachamara nnweta? Biko nweere onwe gị inye m nduzi ọ bụla iji melite edemede a!
Tags: gbasara ikeokpukpuagba frequenciespalette agbaatụmatụ agba paletteagba agbaatụmatụ agbaụcha agbaagbammekoritaagbako agbaụlọanyaanwurektanguluacha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụrgbndògbawaa ekemusquareogeatọ